Kuthetha ukuthini ukuphupha inkunzi enye okanye ezingaphezulu? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Yintoni intsingiselo yokuphupha inkunzi yenkomo okanye iinkunzi ezininzi?
2 Ngaba kulungile ukuphupha iinkunzi zeenkomo?
3 Intsingiselo yokuphupha ngeenkomo neenkomo
4 Intsingiselo yokuphupha ngamanqatha atyebileyo nabhityileyo
5 Kuthetha ukuthini ukuphupha inkunzi yenkomo emhlophe, emdaka okanye emnyama?
6 Intsingiselo yokuphupha malunga nokulwa kweenkomo (inkomo emnyama)
7 Ukuphupha ngeenkunzi zikuleqa, kuthetha ntoni?
8 Intsingiselo yokuphupha ngeenkomo ezineempondo
9 Intsingiselo yokuphupha iinkunzi ezilulamileyo, ukuthoba okanye ukutya emadlelweni
10 Intsingiselo yeli phupha lomntu
11 Intsingiselo yeli phupha kubafazi
12 Intsingiselo yokuphupha ndithatha ibhafu yegazi
13 Intsingiselo yokuphupha malunga neenkunzi zeenkomo
14 Intsingiselo yokuphupha ithole
15 Ukuphupha iinkomo luphawu lwantoni?
Yintoni intsingiselo yokuphupha inkunzi yenkomo okanye iinkunzi ezininzi?
Ukuphupha ngenkunzi yenkomo, okanye ukuphupha ngeenkunzi ngokubanzi, kuthetha ukuba ubuzingisile kwaye unamandla kakhulu, ke usendleleni elungileyo. Indlela obakhusela ngayo abantu abakungqongileyo yenza ukuba wonke umntu agqibe ngokuncoma ubuntu bakho kakhulu.
Ngethamsanqa kumacandelo ezemali kunye nobuchwephesha kukwabonisa okuhle kwabo babephupha. UThixo ubujongile ubomi bakho kwaye waqinisekisa ukuba izicwangciso zakho zinokufezekiswa ngeyona ndlela intle. Into ephambili kukuthatha eli thuba ukutshintsha ubomi babantu abaninzi abakungqongileyo.
Ngaba kulungile ukuphupha iinkunzi zeenkomo?
Ukuphupha iinkunzi zeenkomo akunantsingiselo imbi kwaye oko kuya kubonisa kuphela izinto ezintle. Njengokuba isilwanyana somelele, sikhusela, somelele kwaye sinyulu, ikwanazo zonke ezi mpawu. Eyona nto ibalulekileyo kukubavusa kwaye ke wenze umahluko ngendlela elungileyo.
Ukuphupha iinkunzi zenkomo kubonisa isidingo sokuba ngumntu ongcono kwaye unazo zonke izixhobo zokwenza njalo. Ukuba uphuphe eli phupha, ngumqondiso weempawu ezintle kuzo zonke iinkalo zobomi bakho. Izihloko ezilandelayo ziya kubonisa iintsingiselo ezichanekileyo kwabo baphupha ngolu hlobo lwento.
Intsingiselo yokuphupha ngeenkomo neenkomo
Kuyimfuneko ukumamela izizathu zakho kunye nentliziyo yakho, eli phupha limele kanye le mfuno. Inkunzi yinkomo yecala, oko kukuthi, inqabileyo kwaye iyona nto ibaluleke kakhulu, inkomo yinkalo yecala, ngoko ke, ihlala iqiqa onke amanqaku. Ke ngoko, ukuphupha ngeenkomo kunye neenkomo kuthetha ukuba unikela ingqalelo kuzo zombini, zombini ukuqiqa kunye nentliziyo yakho ngamaxesha abalulekileyo obomi bakho.
Intsingiselo yokuphupha ngamanqatha atyebileyo nabhityileyo
Ubomi bakho buza kungena kwisigaba esihle kakhulu semali ukuba inkunzi yenkomo ityebile, kuba imele ukuchuma. Ngokuchasene noko, ukuba ibhokhwe ibhityile ikwaluphawu lwexesha elithile lobunzima eliza kuvela.
Kuthetha ukuthini ukuphupha inkunzi yenkomo emhlophe, emdaka okanye emnyama?
Eli phupha lineentsingiselo ezintathu ezahlukeneyo kwaye ukuba inkunzi yenkomo imhlophe luphawu lokuphakama ngokomoya okuyingozi kakhulu. UBrown, kwelinye icala, uya kuhlala kakuhle kukhetho oya kuyenza. Ukuba umbala umnyama iya kuba luphawu olucacileyo lokuba umntu angakukhathaza ngexesha elifutshane.
Intsingiselo yokuphupha inkunzi ehlasela umntu, esukela kunye neenkunzi ezininzi
Inkxalabo kubahlobo bakho yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo, kuba yinto ebalaseleyo. Ukuba uphupha inkunzi ebaleka emva kwakho okanye ikuleqa, luphawu lokuba kukho umntu okumonelayo emsebenzini wakho kwaye kubalulekile ukuba ube nengqwalaselo. Ukuba kukho ukukrweleka okuninzi kungumqondiso wokuba kufuna umgudu kunye nesimo sengqondo ukuze uphumelele.
Intsingiselo yokuphupha malunga nokulwa kweenkomo (inkomo emnyama)
Ngamanye amaxesha iqabane lethu elithandanayo lisenokungafuni ukulala ngesondo rhoqo njengoko usenza. Ukuphupha ngeenkunzi ezikhaliphileyo kunye nesibindi kubonisa isidingo sokumisa yonke le milo ngokungathandabuzekiyo eyenzeka rhoqo.
Ukuphupha ngeenkunzi zikuleqa, kuthetha ntoni?
Ukuba ephupheni lakho uzibona uleqwa yinkomo uze ubaleke ayisiyonto ilungileyo leyo. Kuthetha ukuba siza kuba neengxaki zomsebenzi okanye zobungcali, kwaye ziya kubangelwa ngumona okanye umona womntu ohambelana naloo ndawo yomsebenzi wethu. Mhlawumbi kungenxa yokhuphiswano ngokubhekisele kunyuselo olusondeleyo, okanye ngenxa yokuba omnye umntu enomona kwaye efuna ukubonwa ngaphezulu kunawe, kodwa kuyo nayiphi na imeko baya kuzama ukuthintela kunye nokuthintela ukusebenza kwakho.
Intsingiselo yokuphupha ngeenkomo ezineempondo
Ubomi bakho bezemali kuya kufuneka bujongwe ngendlela eyahlukileyo ukuze uphumelele. Iya kuba ngumzuzu wokusebenzisa eli thuba ukwenza umahluko ngendlela elungileyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukusebenzisa eli thuba ngokufanelekileyo.
Intsingiselo yokuphupha iinkunzi ezilulamileyo, ukuthoba okanye ukutya emadlelweni
Ukuba inkunzi isisiqhwala ngumqondiso ocacileyo wokuba ubune-positive kwaye yonke into izakulunga. Ukubona isilwanyana sikhonya okanye ukutyisa emadlelweni luphawu lokuba izibonelelo ziya kusebenza emsebenzini wakho kwaye le ngongoma inomdla kakhulu. Njengoko sibona, ukuphupha ngeenkunzi eziluhlaza kuyenzeka kakuhle.
Intsingiselo yeli phupha lomntu
Unamandla amakhulu kuyo yonke into oyenzayo, Oko kukuthi, indlela yokuhamba yile. Ukuphupha iinkunzi zomntu luphawu olucacileyo lokuba kusenokufuneka ukuqhubeka nokulwa neminqweno.
Intsingiselo yeli phupha kubafazi
Kuya kufuneka ufunde ukulawula amandla akho esini ukuze wenze izinto zibengcono. Eli phupha, kwimeko yokuphupha ngu mujer, ibonisa ukuba kufuneka ube nolawulo kuyo yonke le nto ukuze ungenzi ngokuqhutywa yimpembelelo.
Intsingiselo yokuphupha ndithatha ibhafu yegazi
Umqondiso ocacileyo wesidingo sokufezekisa ulwazi olusebenzayo ngakumbi ebomini bakho. Kuyimfuneko ukuba ukhankanye ukuba ukufunda ngayo okanye ukuhlala unxibelelana noThixo kuya kuhlala kungoyena ndoqo kuwe.
Intsingiselo yokuphupha malunga neenkunzi zeenkomo
Indlela obaleke ngayo ingxaki yinto enzima eya kuthi ifanelwe kukuqwalaselwa. Zama ukujongana neemeko ngqo kwaye uza kubona ukuba ibisisigqibo esifanelekileyo kuwe.
Intsingiselo yokuphupha ithole
Kuya kufuneka ufumane indlela yokubeka ubomi obutsha ebomini bakho kwaye kufuneka wenziwe ngokukhawuleza. Khangela iikhosi ezintsha, tshintsha imisebenzi kwaye ukuba kunokwenzeka vumela ukudibana nabantu abatsha.
Ukuphupha iinkomo luphawu lwantoni?
Kuya kufuneka ugcine oko kusebenza kwaye uzame ukulungisa okungasebenziyo. Elona xesha lifanelekileyo lokutshintsha imeko yakho ngoku kwaye esona sizathu siphambili nguwe.